सरकारमा सहभागी हुने विषय प्राथमिकतामा रहेको राजपाको निष्कर्ष » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सरकारमा सहभागी हुने विषय प्राथमिकतामा रहेको राजपाको निष्कर्ष
मंगलवार, असार ५, २०७५ १६:३९ मा प्रकाशित !
काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारमा जाने विषयलाई प्राथमिकता नदिने बताएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीको मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकले सरकारमा जाने विषयलाई प्राथमिकता नदिने निर्णय गरेको हो। सरकारमा जाने विषय पार्टीको प्राथमिकतामा नरहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको पार्टीका नेता वृशेषचन्द्र लालले जानकारी दिए।
बैठकले संविधान संशोधनको विषयलाई भने पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी समेत सहभागी रहेको प्रदेश २ को सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दो पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीको सोमबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको राजनीतिक समितिको बैठक पार्टीको विधान निर्माणमा केन्द्रित छ। आन्तरिक लोकतन्त्रसहित मजदुत संगठन निर्माण गर्नेगरी पार्टीको विधान निर्माणको काममा बैठक केन्द्रित भएको पनि नेता लालले जानकारी दिए। बैठकमा पार्टी संसदीय दलको नेता चयनको विषयलाई प्रवेश गराइएको छ। आसन्न महाधिवेशन र पार्टी संसदीय दलको नेता चयनका विषयमा ठोस निर्णय लिन पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक बोलाइएको हो।
बैठकमा नेताहरुले युवाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी पार्टीको विधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको राष्ट्रिय जनता पाटीले जनाएको छ। यसअघि राजपाले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सकारात्मक भएको जनाएको थियो। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भइसकेपछि राजपाभित्र पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दबाव बढेको छ।
PREVIOUS POST Previous post: विश्वकप- ‘५ः ४५ बजे कोलम्विया भर्सेस जापान, कस्ले मार्ला बाजी ?’
NEXT POST Next post: नफेरिने भो कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, असार ५, २०७५ १६:३९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, असार ५, २०७५ १६:३९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, असार ५, २०७५ १६:३९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, असार ५, २०७५ १६:३९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, असार ५, २०७५ १६:३९